उडेके केहि मिनेटमै सैनिक विमान दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, के भन्छ रक्षा मन्त्रालय ? — Sanchar Kendra
उडेके केहि मिनेटमै सैनिक विमान दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, के भन्छ रक्षा मन्त्रालय ?
मेक्सिको सिटी । मेक्सिको वायुसेवाको एउटा विमान भेराक्रुज राज्यमा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा छ जना सैनिकको मृत्यु भएको छ । मेक्सिकोको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त दुर्घटना एमिलियानो जापाटा नगरपालिका क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा एल लेन्सेरो विमानस्थलबाट आइतबार उड्नासाथ लियरजेट ४५ नामको उक्त विमान दुर्घटना भएको उल्लेख छ । सेनाले विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन शुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
यता भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज (सोमबार) देखि सबै किसिमका राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम आयोजनामा रोक लगाइएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै महाराष्ट्रमा भेला हुन तथा कार्यक्रम आयोजनामा रोक लगाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै आगामी केही दिनसम्म राजनीतिक आन्दोलनको लागि समेत अनुमति नदिइने बताए । आन्दोलनका कार्यक्रममा मानिसहरुको भीड हुने भएकाले त्यस्ता कार्यक्रमका लागि पनि अनुमति प्रदान नगरिने उनको भनाइ थियो ।
महाराष्ट्रमा कोरोना महामारी फैलन क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री ठाकरेले अबको १५ दिनभित्र थप स्पष्ट हुन सकिने बताए । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय औसत तुलनामा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गोवा र चन्डिगढमा कोरोना संक्रमणको दर बढी रहेको छ ।
हस्ताक्षर समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै